Arovy ireo sehatra manan-danja izay afaka manamarina loharanom-pahamendrehana azo antoka ho an'ny famenoana sy fitehirizana ny fiasa ara-tontolo iainana. ref
Ny faritra manan-kery (izany hoe ireo vondrom-piarahamonina sy ireo rafitra izay voatery mitoetra ho velona) dia manan-danja mba hiarovana satria ireo faritra ireo dia tandindonin-doza hitandroana sy hikojakojana ny loharano ilaina mba hamenoana faritra simba.
Ireto faritra manan-tantara manaraka ireto dia manome sehatra fiasa ara-tontolo iainana manan-danja ary tokony hodinihina amin'ny fampidirana ao amin'ny MPA:
Loharanom-boalavo sy fanangonam-bolo: Rehefa miangona ny biby dia mora tohina izy ireo ary matetika ny antony itondrany dia zava-dehibe amin'ny fikojakojana ny mponina. Noho izany, ny tranonkala lehibe ivondronan'ireo biby na agregate dia tsy maintsy arovana mba hiarovana sy / na hamerenana amin'ny laoniny ny fifandanjan'ny voajanahary ao amin'ny fiarahamonina
Fampandrosoana sy fonenana fonenana ary toeram-ponenana hafa ao amin'ny toeram-piainana sasany ho an'ny karazan-javamaniry: Ny karazam-borona dia mampiasa karazana fonenana samihafa. Tokony hojerena amin'ny endriky ny MPA ny sehatra fampandrosoana sy ny fikarakarana satria mandray anjara mavitrika amin'ny fikolokoloana ny tontolo iainana.
Fiterahana ho an'ny karazam-borona tsy fahita firy na fandrahonana (ohatra zaridaina): Tena mety hampidi-doza ny fampidirana ireny tranonkala ireny ao anatin'ilay tambajotra afaka manampy amin'ny fiarovana ireo karazam-biby rehetra sy ny fizotry ny tontolo iainana.